Kpee ekpere ka o chee banyere m. ? Ehihie na abalị [na Nlaghachi]
6 Mingụ Nkeji
Ekpere ka m chee. Anyị bi na mkpa nke mmetụta nke ịbụ ndị a hụrụ n'anya na ndị a chọrọ, nke a bụ, ruo n'ókè ụfọdụ, nkịtị. Egwu ajuju amụbaala mkpa ahụ ma anyị na-achọta onwe anyị mgbe ụfọdụ na-achọ ụfọdụ Ekpere mere m chee Abalị na ehihie, bịaghachi na-akpọ m.
Nke a dị ka oke enweghị ike mana onweghị ihe dị na ya.
Ekpere bụ ngwa ọgụ ime mmụọ anyị kachasị ike, yabụ na anyị ekwesịghị inwe obi abụọ ma were ya oge ọ bụla anyị gbooro mkpa ọ bụla, n’agbanyeghi etu o siri sie ike.
Ekpere ga-edozi mgbe niile ma nke a metụtara akụkụ niile nke ndụ anyị.
Enwere ikike pụrụ iche maka ihe niile, maka otu a enwerekwa nhatanha nke ịdị irè ma dị ike karịa ndị ọzọ.
1 Ekpere ị na-eche banyere m ga-arụ ọrụ?
1.1 Ekpere bu Mmuo Nso diri ichem
1.2 Ekpere ka m chee maka m ugbu a
1.3 Ekpere ka m chọsie ike
1.4 Ekpere ka m chee banyere m ma laghachite
2 Enwere m ike ikwu ahịrịokwu anọ ahụ?
Ekpere ị na-eche banyere m ga-arụ ọrụ?
Ahịrị ahịrịokwu niile etinye n'isiokwu a bụ nwalere ma nwee ọtụtụ narị ihe akaebe nke ihe ịga nke ọma.
Ha niile dị ike ma nwee ike na-enweghị atụ.
Ọ bụrụ n’e ji okwukwe siri ike kpee ha niile ekpere ma ọ bụrụ na ị nọ na mkpa, ị nwere ike ijide n’aka na ha ga-arụ ọrụ.
Chukwu na ndi nso ozo nyere ndi choro aka. Ọ bụrụ na ị nọ ná mkpa naanị ịrịọ maka enyemaka Chineke.
Ọ ga - eme ka ị chee maka onwe gị, mee ka ị nwee ịhụnanya, chọọ ma nwee nkụda mmụọ, ụbọchị niile, ehihie na abalị, n'oge niile.
Doro anya (kwu aha onye ahụ) na mmetụta m na ahụ m, echiche anụ ahụ na mkpụrụ obi nke onye ahụ, bịakwute m Abalị na ehihie n'agbanyeghị ọnọdụ ị ga-anọ n'akụkụ m.
A na m arịọ gị, n'aha Santa Muerte Lady a na m arịọ gị ka ị nye m ike na njikwa zuru oke, iji mee ka onye ahụ nọrọ m n'akụkụ, a na m arịọ gị ka ị lekọta m anya oge niile, ma kwụsịkwa imezu ihe ọma ndị ahụ m na-arịọ gị.
Ruo mgbe ịchọrọ ya, a na m arịọ gị ka ịkpọrọ m gaa n'ihu gị. Akpọrọ m gị, ahapụkwala m ma arịọ m ka ịghara ileghara m anya.
Inwe ịhụnanya na-eche banyere m bụ obere ihe siri ike.
Ọ bụ ya mere anyị ji ekpegara onye siri ike na ike ike dị ukwuu ikpegara ya ekpere.
Santa Muerte bụ ihe ziri ezi ime ya.
Ekpere ka m chee maka m ugbu a
A na m abịakwute gị ka ị nwee ike belata obi m ma gwọọ ọnya m ụwa A na m asi gi ario ario maka m, a na m ario enyemaka gi na ebere Gi Onye isi ndi isi m!
Nyere m aka ịkwụsị agụụ m maka ihunanya, nyere m aka imepụta mmetụ nke mmetụta uche na ezigbo .. Mee (kwuo aha onye ahụ hụrụ n'anya) jiri anya ịhụnanya dị ọcha bịakwute m.
Gee nti arịrịọ nile nke obim, ahapụkwala m na Onye isi nduzi ịhụnanya, onye isi nke eluigwe.
Gi onye kwesiri ihunanya nke onye kachasi nma, choo udo n’ime obi M jujuo afọ ojuju nke obi uto onye a m hụworo n’anya. Amaara m na ịdị mma gị ga-emetụ gị n’obi ma bịakwute m, dịka ohu Chineke na anyị abụọ , will ga-arụ ọrụ ebube.
ịhụnanya gị bụ infinito Onye isi ndi isi m, idi uku gi juputara m na ekele m ga-adi ebighi ebiTa aka ya n’obi I gha gwo nke m ozigbo.
Ka ịdị mma dịrị m ma hụkwa n’anya gị n ’ụwa, Amen!
Na nke a, anyị ga-ahụ nsonaazụ nke ekpere ozugbo ọ bụrụgodi na anyị enweghị ike ịchọpụta ya, nke a bụ ihe dị ike banyere ekpere a, nke na-akpọ anyị ka anyị kwere na ọrụ ebube ahụ emere n'agbanyeghị na anyị anaghị ahụ nsonazụ ahụ n'onwe ya.
Fọdụ nwere nkwenye ahụ kpee ekpere ma ọ bụ jụọ ebumnuche nke ichoro ma obu echiche nke ndị ọzọ bụ omume nke ịchọ ọdịmma onwe anyị nanị, mana ndị ọzọ kwenyere na ọ bụ omume ịhụnanya na enwere ọtụtụ echiche.
Dịka ọmụmaatụ n'ọnọdụ ndị ahụ mpako emeela ma kwe ka onye na-abụghị ogwe aka ya gbagọọ, mgbe ahụ, otu ekpere a dị ike maka ndị m hụrụ n'anya chebara m echiche nwere ike bara uru nke ukwuu, mana ọ bụghị na anyị ga-emejọ ihe. ka onye obula, ma anyi jiri ekpere anyi ga agba mbo ihie na ebe ohuru.
Ebumnuche bụ imepụta mkpa maka ịbịaru nso, ọ bụghị ịzọ onye ọzọ ikpebi ma mee ihe m chọrọ.
Ekpere ka m chọsie ike
“Le anya m ugbu a, n'oge a (ị kpọtụrụ aha onye ahụ) Achọrọ m ka ị chọọ m, ebe ọ bụla ịnọ.
Dinwenu, ugbu a, a na m arịọ gị ka (aha onye ahụ) tinye echiche gị nanị m, na enweghị m ike iche maka ihe ọ bụla karịa m, na itinye uche gị naanị nye m.
Nke ahụ n'ụzọ dị otu a ka m ghota na ịchọrọ m na ndụ gị, na ịgaghị anọ ụbọchị ọzọ na-enweghị ịhụnanya m. Mee ka oge a (aha mmadụ) chefuo mpako gị, kpọọ m, chọọ m nke ukwuu ma chọọ ịnọnyere m n'akụkụ gị niile.
Site n'ike nke Chukwu, a na m akpọku ndị mmụọ ozi ya atọ. MIGUEL, RAFAEL, GABRIEL, nke mere na ha bikwasiri aka (aha onye ahụ) na enweghị ike ịpụ na nke abụọ n'uche ha.
Ka obi ya, ahụ ya, mkpụrụ obi ya na nke m bụrụ nke m, ọ bụkwa naanị m, na ọ na-eche naanị ma chọọ m, ka o wee wezụgasịa ndị niile na-achọ ịbịakwute ụma.
N'aha Jizọs, amin. ”
Ekpere di ike nye ihe niile anyi choro nwere dika ndi mmadu na mmetuta a choro rue obi nkoropụ, bukwa ihe anyi ga anwa igbo anyi n’oge niile.
Kpee ekpere ka ị gwa onye nke ọzọ, di na nwunye nke ugbu a, ma ọ bụ ụfọdụ onye hapụrụ m na nso nso a, na-eche na ịchọ anyị bụ ụzọ kacha mma iji kpasuo ya iwe.
A na-atụ aro nke ukwuu Kpee ekpere ịchọ onye ahụ ma gosipụta onwe anyị na ọjụjụ na-egbu mgbu.
Ekpere nwere ike ibu karia n’okwu, ihe niile dị na okwukwe nke anyị ji ekpe ekpere.
Ekpere ka m chee banyere m ma laghachite
“N'ike nke Chukwu, a na m arịọ gị mmụọ nke nkụda mmụọ, mmụọ nke ike ọchịchị, ụjọ.
Akpọkuru m gị ka ị nyere m aka ịchịkwa (aha onye ahụ) ma na-ejikwa uche ha 5, ka ọ bụrụ na n'ụzọ a enweghị m ike ịpụ n'uche ha nke abụọ.
A na m arịọ gị, ka ị bụrụ onye ndu m n’ụzọ a m chọrọ ịga, ka (aha onye ahụ) bụrụ naanị nke m, ka i wee hapụ ndị niile chọrọ ịnabata ebumnuche na-agabiga ọbụbụenyi ma ọ bụ ndị chọrọ si n'ebe m nọ wezuga ya
A na m arịọ gị, ka ị bụrụ naanị echiche gị n'ehihie na abalị, ka ị chọọ ịchọ m wee nọrọ n'akụkụ m.
N'aha gị, mmụọ dị ukwuu. Amen. ”
Rịọ maka enyemaka nke mmụọ iji nweta nlọghachi nke onye hapụrụ anyị bụ omume a na-eme kemgbe ọtụtụ afọ.
Ha na-akpọ ya la ekpere nke obi nkoropụ o dikwa ike karie ka ichoro.
Enwere ike ikpe ekpere ndị a n’oge ọ bụla n’ụbọchị, ihe ị ga-ebu n’uche bụ ihe ị chọrọ n’ezie.
Ebe okwesịrị iji echiche doro anya mee ihe iji zere ịrịọ ihe anyị achọghị n'ezie ma ọlị.
Enwere m ike ikwu ahịrịokwu anọ ahụ?
Otutu ndi mmadu amaghi ma ha puru ikpe ekpere karia otu ekpere. N'okwu a, anyị nwere ike ịsị ee.
Kpee ekpere niile ị chọrọ, mana naanị mee ya n’ụbọchị dị iche iche.
Ekpekwala ekpere maka otu ubochi ahu.
Gbalịa ịhapụ oghere nke ụbọchị 1 n'etiti ekpere ọ bụla iji chee echiche banyere m ma rọrọ m nrọ ụbọchị dum na ugbu a.
Okwukwe bu ihe kachasi mkpa n’ekpere niile. Ọ bụrụ n’inwe okwukwe ma na-ekpekwa ekpere mgbe niile ikwere na ihe niile ga-ada, ekpere niile ga-arụ ọrụ.